Facebook ၏ကြော်ငြာသည် ၄၀၀% ရရှိမှုကိုရရှိစေသည်
Facebook ကြော်ငြာများဖြင့်ဝယ်ယူမှု ၄၀၀% တိုး
တနင်္ဂနွေ, ဇွန် 27, 2010 ကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 22, 2012 Douglas Karr
ငါပိုင်သောဆိုဒ်များတစ်ခုဖြစ်သည် NavyVets.com။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားနှင့်နီးစပ်သောဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်အဖေရောကျွန်တော်ပါဒါကိုစီမံခန့်ခွဲတာပါ။ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုကူညီမယ့်အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းက၎င်းသည် (ပျော်စရာ) ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်။ ဝယ်ယူမှုသည်ပုံမှန် ဖြစ်၍ တဖြည်းဖြည်းအရှိန်မြင့်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသင်းဝင် ၂၅၀၀ ကျော်နှင့်တစ်လလျှင် ၇၅ ခန့်စုဆောင်းနိုင်သည်။
ငါမစခင်အထိ Facebook ကြော်ငြာ.
ကျွန်ုပ်ပထမ ဦး ဆုံးပြုလုပ်သောအရာမှာကျွန်ုပ်၏ Ning ကွန်ယက်၏လုပ်ဆောင်ချက် feeds များကိုပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်သည် ရေတပ်ဝါရင့် Facebook စာမျက်နှာ။ ၎င်းသည်များပြားလှသောဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာအားလှုပ်ရှားမှုများစွာဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
နောက်တစ်ဆင့်မှာဘတ်ဂျက်ကိုသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် Facebook ရှိသူတိုင်းကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည် ရေတပ် သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်။ ဤသည်မှာရပ်ရွာတစ်ခု ဖြစ်၍ တက်ကြွသောပစ်မှတ် ၆၀၀၀၀ ကျော်ပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဘတ်ဂျက်ကိုတစ်နေ့လျှင်ဒေါ်လာ ၄၀ သတ်မှတ်ပြီးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုစတင်ခဲ့သည်။ ၁၇ ရက်အတွင်းမှာဒေါ်လာ ၁၀၀ ကုန်ကျတဲ့ Facebook Page ကိုပရိသတ် ၁,၁၀၀ ကျော်ထည့်ပြီးပြီ။ ၈၀၀ ခန့်သာလျှင်ကြော်ငြာကိုနှိပ်လိုက်ကြရာရာဂဏန်းအနည်းငယ်သာ Facebook Walls မှတစ်ဆင့်ဗိုင်းရပ်စ် ၀ ယ်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ချက်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ကျစရိတ်သည် ၀.၂၄ ဒေါ်လာဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်နှုန်းသည်ပုံသဏ္60,000ာန် ၆၆၀,၀၀၀ ကျော်နှင့် ၀.၁၂% (ကျွန်ုပ်လိုချင်သည်ထက်နိမ့်သည်) ဖြစ်သည်။
အသင်း ၀ င်ခြင်းအတွက် Google Analytics အတွက်ရည်မှန်းချက်ကိုဒီမှာထားခဲ့တယ် အပတ်စဉ်ရလဒ်များ:
အဆိုပါ trickle-down အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ တစ်လကိုအဖွဲ့ ၀ င်အသစ် ၇၅ ယောက်ထပ်တိုးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ပတ်ကို ၁၀၀ အထိရှိနေပြီ။ လူမှုကွန်ယက်မှ ၀ င်ငွေသည်လက်ရှိတွင်အသင်း ၀ င်တစ် ဦး လျှင် ၀.၀၈ ဒေါ်လာဖြစ်သောကြောင့်ဤကြိုးပမ်းမှုအပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးအမြတ်ရှိသည်။ တစ်နှစ်အတွင်းအသင်း ၀ င်များ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုတိုက်ရိုက်ပေးချေသည်။
၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်လူကြိုက်များလာသည်နှင့်အမျှကြော်ငြာဝင်ငွေသည်သွယ်ဝိုက်။ တိုးလာသဖြင့်အချိန်တိုအတွင်းကုန်ကျစရိတ်များကိုပြန်လည်သက်သာသင့်သည်။ Facebook Ads ကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းကဒီကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ အသင်း ၀ င်များကို NavyVets.com သို့ ၀ င်ရောက်ရန် Facebook အားအမှန်တကယ်ခိုးယူနေသည်ဟူသောအငြင်းပွားစရာအချို့ရှိသည်ဟုကျွန်တော်ထင်ပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပေးဆောင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် Facebook ကဂရုမစိုက်ပါ။
နေ့စဉ်ကလစ်နှိပ်ကောက်ယူနှုန်း Facebook ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှု (CTR) -
Facebook Ads ၏အခြားကောင်းသည့်အချက်တစ်ခုမှာစာမျက်နှာ၏ပန်ကြားလွှာဖြစ်လာသည့်အသင်း ၀ င်ကိုကြော်ငြာကရပ်တန့်သွားစေခြင်းဖြစ်သည်။ အရမ်းကောင်းတဲ့ကြော်ငြာအထုပ်တစ်ခုပါ ငါသူတို့ရက်သတ္တပတ်၏ရက်ပေါင်း, ညနှင့်ရက်ပေါင်းများစွာများအတွက် filtering ကိုထည့်သွင်းစေလိုကြောင်း - ဒါပေမယ့်ဒီအတော်လေးကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်နေ!
Tags: ရယူခြင်းfacebook ကိုကြော်ငြာတွေရေတပ် veterရေတပ်